Orinasa hamokatra fanafody :: Manomboka mitady mpiasa ny Pharmalagasy • AoRaha
Raikitra ny tolotra asa aroson’ny fitondram-panjakana ho an’ireo mpikaroka sy manam-pahaizana afaka hampihodina an’ilay orinasa malagasy famokarana fanafody na ny Pharmalagasy. Toerana dimy, ahitana Tale misahana ny fitantanana, mpikirakira milina, tompon’ andraikitra amin’ny famokarana, delege ara-pahasalamana ary tompon’andraikitra arabarotra, no misokatra, amin’ izao fiandohan’ny fitadiavana mpiasa izao.
Tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo no efa nanomboka nanaparitaka ny antso ao anatin’ireo gazety an-tsoratra mpiseho isan’ andro, eto Madagasikara, ny fanjakana. Hifarana, afaka iray volana, io antso voalohany io. Aorian’izay no hanao ny antso manaraka ho amin’ny toerana hafa eo anivon’ny ozinina ny fanjakana, araka ny fanazavan’ ny loharanom-baovao iray eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, omaly.
“Tanjona ny hampihodinana ny orinasa Pharmalagasy amin’ ny fotoana faran’izay haingana. Manomboka amin’ny fitadiavana manam-pahaizana isika ary raisina avokoa na Malagasy na teratany vahiny rehefa mahafeno ny fepetra ilaina. Misokatra ihany koa ny fiaraha-miasa ho an’ireo mpandraharaha te-hampiasa vola ao amin’ny ozinina”, hoy hatrany itsy loharanombaovao itsy.
Fanafody karazany roa ambin’ny folo no hovokarina ao amin’ny Pharmalagasy, ao anatin’ny telo taona monja, araka ny efa nolazain’ny Filoha Rajoelina Andry. Anisan’ireo laharam-pahamehana ny famokarana ny “CVO+”, fanafody hoentina hitsaboana an’ireo mararin’ny Covid-19.
Voka-dratsin’ny valanaretina :: Namono olona efatra tao anatin’ ny 48 ora ny Covid-19
Fandaniana ny LFR 2020 :: Mitaky ny hitantana ny tetibolan’ izy ireo ny Antenimierandoholona